သင့် Facebook အကောင့် အခိုးမခံရအောင် ကာကွယ်နည်း | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
ချစ်သူကို အချိန်ချိန်မှန်မှန် Message ပို့ချင်တဲ့ ...
Huawei C8815 imei ပျောက် Sim Card မသိ 1x error 3G ...
C8815 Sim Error Fixer < Developed by Phyo Chan >
Samsung Galaxy Ace2GT-I8160 Jelley Bean version ...
Facebook Official version v7.0.0.26.28.apk For And...
ဒီapk လေးနဲ့ GPSကိုဖွင့်ပြီး နက္ခတ် leo ကို ဘယ်လိုဖ...
IMEI ပြသနာတွေကို One Click နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ 
Galaxy Note3SM-N9005 KitKat version 4.4.2 ကို my...
Samsung Galaxy Note3SM-N900 KitKat version 4.4.2...
အမေးအဖြေ ရှင်းလင်းချက် -> CWM နှင့် Custom Rom ဆို...
Total SmS Control v2.1.1 for Android Apk နှင့် အသံ...
Internet Watch Pro Version Update: 1.02 (For Andro...
FaceBook အကောင့် ကို Browser မသုံးပဲ ID နဲ. ဖောက်မ...
Android ကိုဘယ်လို ဖွဲ့စည်းထားပါသလဲ?
sms ပို့ ပြီး Pattern Lock & Password Lock ကို ဖြု...
Samsung S3 အတွက် Dead Boot နိုးတဲ့ ကဒ် ပြုလုပ်နည်း...
Facebook Photo Command လဲရ Video Download လဲရတဲ့ 8...
Myanmar IT Group.apk လေးကို ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ထုတ်ဝေ...
စကားအလှ မြန်မာက.apk(666 kB)
သင့် Facebook အကောင့် အခိုးမခံရအောင် ကာကွယ်နည်း
Myanmar Zawgyi Pad (v1.1)Update
MM Aio Font Changer (Android Version 1.6 မှ 4.4.2 ...
Navigation လှလှလေး ဖန်တီးကြရအောင်
ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပြူတာ Boot Loader ဘယ်လို Develop လု...
BIOS Password ဖြေနည်း
C- Box မှာ Administrator Password ကို CMD(Command)...
﻿check,analysis,defrag,web hstory -computer clearn...
လမ်းတံတား ဆောက်လုပ်ရေးသမားများအတွက် နည်းယူစရာ Brid...
မြန်မာ့ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓါန်ပါဝင်သော Shweb...
Android ဖုန်းမှာ မှားဖျက်မိတဲ့ data တွေကို ပြန်ရှာ...
Memory ကဒ်ထဲက မှားဖျက်မိတဲ့ data တွေကို ပြန်ယူဖို့...
Solidworks Premium Edition 2014 With Crack ( 32 Bi...
အရုပ်ကလေးတွေဆက်တာဝါသနာပါကြသူများအတွက် Sniper Force...
အရမ်းကို ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးဂိမ်းလေးဗျှိ...
ကျနော်ကိုယ်တိုင် ၂ရက်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ လုပ်ထား...
Huawei G610 Official Firmwares
အာရှတိုက်ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေ သိလိုသူများအတွက် အာရှတို...
ဖုန်းက သုံးရတာ အဆင်မပြေဘူး စက်ကလေးနေတယ် ဒါဆို Spee...
ပိုက်ဆံတော့နည်းနည်းပိုကုန်မယ် အင်တာနက်ကို ထိုက်ထို...
LCD Monitor ပြုပြင်နည်းစာအုပ် ( EBook - Simple Eng...
Facebook Profile Picture ဘယ်ကရသလဲစစ်ဆေးနည်း
ဓမ္မာစရိယ စာသင်သားများအတွက် စာအုပ်ပေါင်း (၈၂)အုပ်
မိမိရဲ့ ဖုန်းကို လေကလေးနဲ့ မှုတ်ပြီး Lock ဖွင့်လိ...
Ultimate Guitar Tabs & Chordsv3.0.1 Full Version A...
Backup Text for Viber v.0.9.5 APK (Viber က message...
မိမိ Blog တွေ Web Site တွေမှာ Music Player ဒီဇိုင်...
facebook photo lock ဖြုတ်နည်းလေးပါ
RollNY3D Game ကလေးပါ
Viber-Group ဖွဲ့ပြီးတော့ သယ်ရင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပ...
Viber Group တွေ စိတ်ပျက်နေကြသူများအတွက် နှုတ်ထွက်န...
openကိုကလစ်ရင် ဖိုင်လေးထွက်လာမယ် close ကိုနိပ်လိုက...
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Knowledge for Facebook
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ သူ့အကောင့်ကို ဆုံးရှုံးရတော့မယ့် ကိန်းရှိလို့ပါတဲ့။ အဲဒါ ဘာတွေ လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ မေးလာပါတယ်။ လုပ်စရာ သိပ်အများကြီး မရှိပါဘူး။ အကောင့်အခိုးခံရဖို့ အခြေအနေ များနေသူများအတွက် ပြုလုပ်ရမယ့် ကာကွယ်ရေးအဆင့်များကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအကျဆုံး လုပ်ရမယ့် အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ Account Setting ကိုဝင်၊ General Tab ကနေပဲ Name, Usernam, Email, Password အစရှိသဖြင့်တို့ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒီတော့ Email ကို Edit လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မိမိ Log in ဝင်နေကျ Email ကိုဖြတ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် မိမိ ပြောင်းလဲချင်တဲ့ Email ကို ရိုက်ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် Password တောင်းပါတယ်။ Password ထည့်ပြီး save လိုက်တဲ့အခါ အရင် အီးမေးလ် အဟောင်းသို့မဟုတ် အသစ်ထည့်လိုက်တဲ့ အီးမေးလ် အဟောင်း သို့မဟုတ် ၂ ခုစလုံးဆီကို စာပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပြောင်းလဲမှုအတွက် Confirm လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပါ။ ဒီတော့ Email အဟောင်းကော၊ အသစ်ကိုပါ စစ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Password ပြောင်းပါ Password ပြောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိမယ့် Password ကိုရွေးရမှာပါ။ မိမိရဲ့  မွေးသက္ကရာဇ်တို့ အမည်တို့ ပါနေတဲ့ Password တွေဆိုရင်မလုံခြုံပါဘူး။ aA1@%com အစရှိသဖြင့် အများခန့်မှန်းရခက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အလွတ်ရဖို့အဆင်ပြေမယ့် စာမျိုးကို ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
General ရဲ့ အောက်မှာ Security ဆိုတဲ့ tab လေးရှိပါတယ်။ သူ့ကို click နှိပ်ပြီး - Secure Browsing ကို Enable လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ သူက ပိုလိုခြုံတဲ့ အင်တာနက် ပရိုတိုကော https ကို ဘယ်အချိန်ဖွင့်ဖွင့် ပို့ပေးမယ့် စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ - ပြီးတော့ Login Notification ကိုလည်း enable လုပ်ရပါမယ်။ ဒါမှ ကိုယ်မရှိတဲ့အချိန် တစ်ယောက်ယောက်က Log In ပြီဆိုရင်လည်း အီးမေးလ်ပို့ပြီး Alert လုပ်ပါတယ်။ -
Trusted Contact ရွေးပါ။
သူက ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို ဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင် Trust ရွေးထားတဲ့ friend တွေဆီကို ကုဒ်ပို့ပါတယ်။ သူတို့က ရရှိတဲ့ကုဒ်နဲ့ ပြန်ဖွင့်ရင် အကောင့်ပြန်ရပါတယ်။ အပြင်မှာ တွေ့ဆုံတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ App တွေ ဖြုတ်ပါ App မှာ ကိုယ်ဆော့နေကျ App ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆော့လေ့ဆော့ထ မရှိတဲ့ Application, အသုံးမပြုဖြစ်တဲ့ App တွေကို Remove လုပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ သူ့ကို App section မှာ ဝင်ပြီး Edit လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Email လုံခြုမှုရှိပါစေ Facebook အကောင့်ကတော့ လုံခြုံသွားပြီ။ ကိုယ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Email သာ မလုံခြုံဘူးရင်လည်း အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်သလို ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ Log in ဝင်ဖုိ့ အသုံးပြုနေကျ Email ကို လုံခြုံမှုရှိအောင်လည်း ပြုလုပ် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Security on Facebook လို့ Search bar မှာရိုက်ထည့်လိုက်ရင် Facebook ရဲ့  Official Security App page ကို ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းမှတစ်ဆင့် Password ပြောင်းလဲခြင်း၊ အမည်ပြောင်းခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပြီး Security အတွက် စိတ်ကြိုက် Edit ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကောင့်သုံးပြီးတိုင်း sign out သေချာပါစေ မိမိ ရဲ့  တစ်ကိုယ်ရေသုံး ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာတို့ဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ သူငယ်ချင်း ပစ္စည်း၊ အများသုံး ပစ္စည်းတွေကနေတစ်ဆင့် သုံးပြီးပြီဆိုရင် Sign out သေချာဖို့လိုပါတယ်။ Browser history ကိုဖြတ်ခဲ့တာ အကောင်းဆုံးပါ။ Link ပေးတိုင်း မနှိပ်ပါနဲ့ ဒါ လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ မိမိအကောင့်က အခိုးခံရမယ့်အနေ အထားလို့သိနေရင် Message box က ပေးလာတဲ့ Link တွေကို အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သေချာ ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ Link မျိုးပဲ နှိပ်သင့်ပါတယ်။ လက်တလော Celebrity အကောင့်များ ပျောက်ခြင်းက Link တွေဆီ ဆက်သွားပြီး Log in လုပ်လို့ပါ။ ဒီတော့ ဆင်ခြင်ဖို့အထူးလိုအ်ပါတယ်။ . ဒီလောက်ဆိုရင် မိမိ အကောင့်အခိုးခံရမယ့် အခြေအနေမှာ ကင်းဝေးပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Ref&Credit-smart pro journal(smart.com.mm)